Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Caalamliga ah ee Crisis Group oo ka Hadlay Wadahadalka ONLF & Ethiopia u furmi doona
Ururka Caalamliga ah ee Crisis Group oo ka Hadlay Wadahadalka ONLF & Ethiopia u furmi doona
Posted by ONA Admin	/ August 6, 2013
Ururka Caalamiga ah ee Crisis Group ayaa maanta soo saarey warbixin dheer oo ay kasoo diyaariyeen Qadiyada Ogadeniya iyaga oo kahadlay wadahadaladi u dhaxeeyay ONLF iyo Gumeysiga Ethiopia. Warbixintan oo ay ku magacaabeen Ethiopia: Prospects for Peace in Ogaden
Ururkan ayaa sheegay in dib u bilaaban doono dhowaan wadahadaladi u dhaxeeyay ONLF iyo Ethiopia. Iyaga oo sheegay in Dowlada Cusub ee Kenya ay dib usoo cusbooneysiisay wakiiladii u qaabilsana wadahadalada ONLF Iyo Ethiopia ee horey u istaagay.
Ururkan ayaa sidoo kale sheegay Qadiyada Ogadeniya oo xal laga gaadho inay tahay mida kaliya ee 3 wadan Somalia, Ethiopia iyo Kenya xal nabadeed iyo mid horumarineedba u horseedi kara
Ururkan oo ka faaloonaya arrimaha ugu muhiimsan ee keenay in wadahadalada ONLF iyo Ethiopia bilowdo Iyo danaha ugu jira dowlada Kenya inay arrimahan dhex dhexaadiso ayaa sheegay
in taliska Ethiopia ay daggaal ku qaadeen dhulka Ogadeniya daggaal dheer oo socday 5 sanno midkaas oo dhibaato badan u geystay shacabka Ogadeniya ee dhulkaas daggaaladu kasocdeen midaas oo sababtay in Jabhada ONLF Qiimeyso wadahadalada lala gali karo Ethiopia.
Dhinaca Kale Taliska Ethiopia oo raba inay ka faaideystaan Kheyraadka Ogadeniya.
Warbixintan ayaa ku dhaleecaysay taliska Ethiopia inkastoo Dowlada Ethiopia ay muujisay inay diyaar u tahay in wadahadal lagu dhameeyo Qadiyada Ogadeniya. Hadana waxaa arrintaas hoos u dhigtay iskudayga Taliska Ethiopia innuu dadkale heshiisyo daciif ah lagalo kuwaas oo sheeganaya Ururka ONLF iyo in taliska Ethiopia iskudayo in dhulka Ogadeniya kasameeyo dhaqdhaqaaqyo ay ku gumaadayaan qabiilada lagu tuhunsanyahay in ONLF taageraan goobaha ururka ONLF awooda badan ku leedahay iyaga oo wakiilanaya mamaulka kajira Ogadeniya ee u adeega taliska Ethiopia. Arrintan waxay keentay in colaado qabiil ka dhacaan deegaanka.
Warbixintan ayaa sheegtay In Raisal wasaarihi hore ee Ethiopia Kaligii taliye Malis Zenawi uu ahaa ninka ka danbeeya in xal loo raadiyo Qadiyada Ogadeniya, ninkaas oo awood u lahaa innuu xalka kagadanbeysta ah go aankeeda bixiyo, markii uu dhintay Zenawi waxaa xumaatay marxaladi wadahadalada ONLF iyo Ethiopia oo daba jiitantay, waxaana lawaayay go’aan qaadasho ka timaada dhinca taliska Ethiopia.
Raisal Wasaaraha Cusub ee Ethiopia Waa maqaar saar aan awood u laheyn innuu la gor gortamo ciidamada militariga Ethiopia ee daggaalka ka oogaya dhulka Ogadeniya kuwaas oo u arka in Jabhada ONLF tabargabtay.
Jabhada ONLF dhankeeda waxaan muuqan go’aan qaadasho lagawada simanyahay Wadahadalka ONLF Iyo Ethiopia. Jabhadu waxa ay daneynaysaa in Ethiopia lalaheshiiyo kaliya hadii ay oggolshahay in heshiiskaas ay ku helayaan in lasiiyo Madax banaani ay awood u yeelanayaan inay isku maamulaan kadibna ay ku gaadhayaan gooni isutaag ay kaga go’ayaan Ethiopia. Gooni goosashada ayaa ah fikrad kasoo jeeda qadiyad Somaliweyn oo dadka ree Ogdeniya ay ku hanweynyihiin in lagaadho. Inkasto oo Sharciga Ethiopia ogolyahay in heer aaya katashi loo ogolaaado, hadana Taliska Ethiopia diyaar uma aha arrintaas waxayna u arkaan qadiyad kale oo somaliweyn kadanbeyso. Arrintan waxa jabhada ONLF ay ku qasabtay inay raadsato Saxiibo ay geeska Africa ka kasbanayso waxayna la xidhatay Dowlada Eritrea oo colaad weyn kala dhaxeyso Ethiopia xidhiidhka ONLF iyo Eritrea Qadiyada Ethiopia ka dhexjirtay waxay ka abuurtay qadiyad heer colaad goboleedsi ah. Taliska Ethiopia khilaafka Ogadeniya waxa uu eega u arkaa mid khatar ku ah amniga Wadanka Ethiopia ilaa jabhada ONLF ay haggaajiso Xidhiidhka ay la leedahay Eritrea iyo Somalia.
Dowlada Kenya oo dhexdhexaadinaysa ONLF iyo Ethiopia waxaa keenay meesha xidhiidh ku saleysan Heshiisyo Amni oo ay la saxiixatay Ethiopia iyo waliba himilada ganacsi ee mashruuca Lamu oo ka dhaxeeya Ethiopia iyo Kenya. Waxaa kale oo la odhan karaa Qabiilada labada wadan degaanka kuwada leh ayaa qeyb ka ah in xidhiidhkan sahlanaado kuwaaso hoggaaminaya gudiga wada hadalada ee Kenya u qaabilsan in ONLF iyo Ethiopia dhex dhexaadiyaan waxaana kamid ah gudigaas niman kasoo jeeda Qabiilka Ogadeen ee kenyatiga ah oo uu kamid yahay Wasiir, laba xildhibaan iyo siyaasi horey ugasoo shaqeyay Dowlada Kenya. Iskudaygan lagu dhexdhexaadinayo Taliska Ethiopia iyo ONLF waxa hoos u riday doorashadii ka bilaabmatay Nairobi march 2013 oo Dowlada Kenya ku mashquushay. Eega Dowlada Kenya waxay markale soo cusbooneysiisay shaqadii ay hayeen gudiga u qaabilsan kenya inay dhex dhexaadiso ONLF iyo Ethiopia warqadaas waxaa saxiixay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata. Walise waxaa caqabad ku ah dowlada Kenya oo ciidamadeedu galeen wadanka Somalia gaar ahan Jubbooyinka iyo waliba Ciidamada Kenya oo arbushaado ka sameeyay deeganada NFD labadaas deegaan Jubaland iyo NFD oo ah iyana dhul ay ku noolyihiin qabiilo kasoo jeeda dhulka Ogadeniya.
Sadexda Wadan ee Somaliya, Kenya, iyo Ethiopia oo dhamaantood qabiilada kasoo jeeda Ogadeniya ay dagaano ku leeyihiin (Qabiiladaasi) Danhooda Siyaasi ay ku leeyihiin Gooobahaas sadexda ah oo xal loo helaa waxay abuuraysa mustaqbalka dheer oo la gaadho horumar iyo nabadgalyo waarta oo loohelo geeska Afrika. Sidaas Awgeed waxaan ugu baaqayna Caalamka, Wadamada Deeqda bixiya iyo kuwo ganacsi ee daneynaya in wadanka Ethiopia goobihiisa macdanta iyo Kheyraadkisa kaleba daneynaya inay siiyaal il goooni ah Wadahadalada Soo cusboonaanaya ee lagu raadinayo in xal waara loogu gaadho qadiyada Ogadeniya. Markaas baa Gargaarka Horumarineed iyo ganacsiga wadajireed uu wax u qaban karaa shacabka Ogadeniya ee mudada dheer kuhabsaday dhibaatooyinka daggaalada lagu oogayay iyo midka siyaasi ee lagu takoorayay bulshadaasi. Wada hadalada nabadeed ee ONLF iyo Ethiopia waxaa kaliya oo horumar dhaqaale iyo mid ganacsi uu geeska Afrika u horseedi karaa kaliya hadii wada hadalada lagu saleeyo dhibaatooyinka dowladnimo gaar ahaan taariikhda dheer ee qadiyada Shacabka Somali ogadeniya tabanayaan.
Wadahadal waara waxaa lagaadhi karaa markii labada dhinacba aysan keenin qodobo la iskuxidho iyo markii Dowlada Kenya wada xaajoodkan aysan ka ahaanin xidhiidhiye labada dhinac ukala dab qaada kaliya Balse qaadato kaalinteeda garsoornimo ee ku aadan dhexdhaxaadinta. Sidoo kale waa inay kaalmo ka geystaan wada hadalkan Ururada ka shaqeeya nabadgalyada amniga Gobolka iyo IGAD.
Waxaa ururkan Crisis Group ugu baaqay Qodobo ay sheegeen in la tixgaliyo si wadahadalka mar labaad dib ugu furmaya ONLF iyo Ethiopia u noqda mid lagu guuleysto waxaana kamid ah
In la helo nidaam lagu maxkamadeeyo Danbiilayaashi daggaal oogayasha ahaa ee dhibaatada ka geystay Dhulka Ogadeniya si xal looguhelo dadki danbiga geysanayay 50 sano ee lasoo dhaafay
In Shidaalka Ogadeniya la ogolaado in Dowlada Ethiopia saamiga iska leedahay balse la dhowro xuquuqda shacabka iyo deegaanka ee reeguraga, oosan taako la rogin aan lagala tashanin dadka deegaanka.
Iyo qodobo kale oo aan halkan ku xusneyn
Ururka Crisis Group ayaa ah urur ka shaqeeya xalinta khilaafaadka wadamada iyo shucuubta u dhaxeeya, waana urur samafal oo ay ka howlgalaan dad caan ku ah daryeelka bani aadamka xuquuqdiisa waxayna talooyin iyo tusaalayaal siiyaan Midowga Euroe, Qaramada midobiay iyo dowladaha horumaray ee arrimahan ka shaqeeya.
Jabhada Wadaniga Xoryenta Ogadeniya ayaa iyadu hadiyo jeer cadeysay goobta ay ka taagantahay wadahalada u dhaxeeya Jabhada ONLF iyo Ethiopia.